1. Zithatha ixesha elingakanani izibane zelanga? Ngokubanzi, iibhetri kwizibane zangaphandle zelanga zinokulindeleka ukuba zihlale malunga neminyaka emi-3-4 ngaphambi kokuba zitshintshwe. Ii-LED ngokwazo zinokuhlala iminyaka elishumi okanye nangaphezulu. Uya kwazi ukuba lixesha lokutshintsha iinxalenye xa izibane zingakwazi ...
Wenza ntoni umlawuli wentlawulo yelanga
Cinga ngesilawuli sentlawulo yelanga njengomlawuli. Ihambisa amandla ukusuka kuludwe lwe-PV ukuya kwimithwalo yenkqubo kunye nebhanki yebhetri. Xa ibhetri ibhetri iphantse yagcwala, umlawuli uya kuyicima imeko yokutshaja ukuze kugcinwe umbane ofunekayo ukuze ugcwalise ngokupheleleyo ibhetri kwaye uyigcine ikhutshiwe ...
Izixhobo zeNkqubo yeLanga ye-Off-grid: ufuna ntoni?
Kwinkqubo yelanga engaphandle kwegridi ufuna iipaneli zelanga, umlawuli wentlawulo, iibhetri kunye ne-inverter. Eli nqaku licacisa iinkcukacha zenkqubo yelanga. Izinto ezifunekayo kwinkqubo yelanga eboshwe yigridi Yonke inkqubo yelanga ifuna izinto ezifanayo ukuqala ngazo. Inkqubo yelanga eboshwe yigridi ...